On this page cusub oo aad waxaa la muujinaysa doonaa images kala duwan in ay matalaan dalka.
Muuqaal : Waxa kale oo aan ku tusi map ula of meesha uu ku beelood Isbaanish.
Gabayayaashiinnu Isbaanish: qaar ka mid ah gabayayaashiinnu Isbaanish ugu caansan ee waqtiga oo dhan leh qaar ka mid ah tusaalooyinka falgal.
Fannaaniinta Isbaanish: kooxaha iyo wakiilka ugu ah ee gabayaaga ahaana music Isbaanish.
Haddii aad qabtid talooyin dheeraad ah, Waxaan diyaar u yihiin in ay dhegeystaan!